Chlorogenic acid. Izici kanye izakhiwo kwamakhemikhali
Coffee uthando ngabantu kakhulu ukunambitheka kwako nomphumela tonic, kodwa bambalwa bayazi ukuthi indima ebaluleke kunazo zonke e walesi siphuzo esithandwayo kakhulu kudlala indima ukubunjwa chlorogenic yayo acid. I izakhiwo elinikeziwe chemical kwakwakhe ngokuyinhloko kwakheka ekhishwa ka Iphunga elihlale nokunambitha elinendawo kuthiwa babaza abalandeli balo abaningi. Ngaphezu kwalokho, into, njengoba kushiwo ku ucwaningo lwamuva enza imizimba yethu izinzuzo eziningi eziphilayo kanye bokuphila. Nokho, izinto zokuqala kuqala.
Kusukela umbono wesayensi yokuthakwa kwamakhemikhali organic chlorogenic acid is esterified caffeine depsides hydroxyl, imi carbon athomu lwesithathu quinic acid. Le ngxube yamakhemikhali elikhona izitshalo eziningi, kodwa okubaluleke kakhulu kuyo ubhontshisi ikhofi ngenxa yokudlanga kokuxhashazwa yabo kokuvamile. Ziqukethe mayelana eziyisikhombisa amaphesenti chlorogenic acid. Muva-ke yathola ukuthi iwumthombo omuhle yalolu ketshezi ongakhonza Eucommia ishiya - isihlahla lezihlahla lafinyelela ukuphakama kwamamitha amabili.
Chlorogenic acid inomsebenzi omkhulu e enzymatic futhi oxidative izinqubo ezihlukahlukene plant cells. Kodwa umzimba wethu, futhi uletha eningi izinzuzo. Chlorogenic acid siyasebenza futhi ephephile amafutha esivuthayo, kuyasiza ukuthola sibalo ukwenzela ukungena okuncane kakhulu. Ngokuqhubekayo, leli kwakwakhe chemical kuthuthukisa izinqubo umzimba e kwesibindi, wenza umsebenzi obalulekile wokuqhekeka amafutha abangena ngaphansi komzimba wethu. Chlorogenic acid futhi unegunya amazinga athile kashukela.
Kuyinto lokhu acid uyakwazi ukuguqula ijubane yashesha yamafutha amaningi izitolo amandla ahlanzekile, okuyinto ebaluleke kakhulu kubantu abafuna ukwehlisa isisindo somzimba. Esinye isici ewusizo kwale nto yikhono layo ukubambezela carbohydrate ukugaya inqubo, okungase futhi zibekwe phezu komzimba inkinga ezindaweni (kwamathanga, esiswini, ezinhlangothini) njengoba amafutha.
Chlorogenic acid elaqala ukutholwa yi sezitshalo Russian futhi A.S.Famintsynym UMuphi e 1893 ku izigaba sunflower cotyledons ngokusebenzisa izinga micro-chemical yokusabela. Ukusakazwa kabanzi kwamakhamera lokhu kwakwakhe chemical phakathi izitshalo ephakeme (Kuye kwatholakala e 98 mi ngomzuzu 230-amasampula wafunda) yabakhanga ososayensi baqala ukutadisha indima yayo yemvelo ukuthuthukiswa kanye lempilo isitshalo eziphilayo.
Ngakho, kwatholakala ukuthi chlorogenic acid (ukuthenga ke kungenziwa kuhlelwe ifomu okumsulwa, lapho kuba mhlophe crystalline powder) is bahileleke ukulawulwa fetus nokuvuthwa izinqubo, kusebenta njengesikhali inhibitor ka oxidative phosphorylation. It is eyaziwa ukuthi kwakwakhe kumakhemikhali enobuthi kakhulu uhlobo oluthile nezilwanyana ezincane pathogenic ezibangela izifo eziningi ezahlukene zezitshalo. Ngokwesibonelo, irayisi nesanda chlorogenic acid biosynthesis ukhonza njengomdala siyindlela engokwemvelo ukutheleleka amagciwane abe nenkani.
Esikhathini esingeside esidlule, ososayensi Chinese wenzé ukutholakala yezokwelapha obalulekile. Ngemva uchungechunge izifundo baye bathola ukuthi lo izidakamizwa eziphila abakhuthele, sibonga ikhono layo eliyingqayizivele ukuvimba amaprotheni anobuthi, unakho ukuba abe ngesisekelo umuthi nokwelashwa ngifundise ngesifo sikashukela.
Umshini Rasposhivalnaya: ziyini izici zalo?
Kuyini ACS? ukufakwa Self ezinezinjini wezikhali: ngezigaba, isiqu
Isitshalo seqanda nge inkukhu: iresiphi
Ngo Uyini isikhathi esingcono kakhulu sokwenza isigenco esiwela kwesokudla
Ukuzikhukhumeza nokuqhosha - yini umehluko?
Decoupage Amakhandlela. Izisekelo ezisemqoka zokuhlobisa
Indlela ukushintsha isikhombisi segundane?
Ihhotela Isis Ihhotela SPA (Tunisia / Djerba): izibuyekezo, izilinganiso, izithombe
Uma ukhipha esiswini ekukhulelweni
Kanjani ukuba abone izimpawu zokuqala zokukhulelwa?
Incazelo itholakala amehlo. Indlela ukuqaphela amanga emehlweni